လည်ပင်းနာသက်သာစေဖို့ ကိုင်နီဆီယိုတိပ်ကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ - Hello Sayarwon
လည်ပင်းနာသက်သာစေဖို့ ကိုင်နီဆီယိုတိပ်ကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ
လည်ပင်းနာခြင်းဟာ အတွေ့ရများတဲ့ ပြာသနာဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်စရာမလိုတဲ့ ကုသမှုတွေဖြစ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အပ်စိုက်ကုခြင်း၊ အပူ အအေးကပ်ခြင်းစတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ကိုင်နီဆီယိုတိပ်ကို ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်း အသစ်တခုအနေနဲ့ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ လည်ပင်းနာခြင်းအပေါ် ထိရောက်မှု ရှိစေတဲ့ ကိုင်နီဆီယိုတိပ်အကြောင်း ဖော်ပြသွားပါမယ်။
ကိုင်နီဆီယိုတိပ်ဟာ လည်ပင်းနာခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
ဒီကုသမှုရဲ့ စိတ်ကူးကတော့ ကိုယ်ခန္ဓါကို သင့်တော်တဲ့ ထောက်ပံ့မှုပေးရင် သူ့ဖာသာ သက်သာသွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လည်ပင်းနာတဲ့အခါ အောက်ပါအခြေအနေတွေ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
– လည်ပင်းတွင် အတော်အတန်မှ ဆိုးရွားတဲ့အထိ နာကျင်ခြင်း
– လည်ပင်းတောင့်ပြီး ဦးခေါင်းမလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း
– ဖြစ်သည့်နေရာတွင် နာကျင်နေခြင်း
– ပခုံး၊ လက်မောင်း၊ လက် စသည့်နေရာများသို့ နာကျင်မှု ပြန့်နှံ့သွားခြင်း
– ပခုံး၊ လက်မောင်း၊ လက်၊ လက်ချောင်းလေးများတွင် ထုံကျင်ခြင်း
– အလေးအပင်မခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ဟန်ချက်ထိန်းခြင်း စသည့်နေရာများတွင် ခက်ခဲခြင်း
လည်ပင်းဟာ မကြာခဏလှုပ်ရှားရတဲ့နေရာ ဖြစ်တာမို့ ကုသရာမှာ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လည်ပင်းလှုပ်ရှားမှုကို ကန့်သတ်မှုမဖြစ်စေဘဲ ကုသနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလိုပါတယ်။ ဒီကုသမုမှာ လည်ပင်းမှာ ပိုပြီးတော့တောင် လှုပ်ရှားလို့ ကောင်းနိုင်ပါတယ်။
ကိုင်နီဆီယိုတိပ်ကို ပခုံးနဲ့ လည်ပင်းနေရာမှာ ကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လည်ပင်းအတွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကိုင်နီဆီယိုတိပ် အမျိုးအစားတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီတိပ်များဟာ လည်ပင်းရဲ့ ကြွက်သားတင်းမာမှုတွေကို လျော့ကျစေပြီး လည်ပင်းကို ပျော့ပြောင်းစေပါတယ်။ ကြွက်သားတင်းမာမှုကို လျော့ကျစေခြင်းဟာ လည်ပင်းနာခြင်းကုသရာမှာ အဓိကကျတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုင်နီဆီယိုတိပ်ကို ထိရောက်အောင် ဘယ်လိုသုံးမလဲ
ကိုင်နီဆီယိုတိပ်ဟာ အသုံးပြုရလွယ်ပေမယ့် အနေအထားမှန်ရအောင် မိမိဖာသာလုပ်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ အတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရှိတဲ့ ကာယကုကျွမ်းကျင်သူကလုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ သင်ပကိုယ်ခန္ဓါမှာ ပုံစံတကျဖြစ်အောင် စည်းပေးနိုင်ပါတယ်။
တိပ်ကို အသားပေါ်မှာ ၂ရက်ကနေ ၅ရက်ကြာအောင် ကွာကျတဲ့အထိ ထားပေးရပါမယ်။ ရေချိုးရင် ရေကူးရင် ဖြုတ်စရာမလိုပါဘူး။ တိပ်သိုနေရင် အဝတ်ခြောက်နဲ့ သုတ်နိုင်ပါတယ်။ တိပ်ကို ဘယ်လောက်ကြာကြာကပ်ထားမလဲဆိုတာ ကာယကုပညာရှင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်မှုပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အချိန်အတိုင်းအတာဟာ ရလဒ်အပေါ် ထိရောက်မှုရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာ၇ှင်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
လည်ပင်းနာခြင်းကို ကုသရာမှာ စိတ်ပူပင်ဖိစီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ လုံး၀ ပျောက်ကင်းခြင်း မရှိဘဲနေတတ်ပါတယ်။ အောက်ပါအချက်တွေနဲ့ ကုကွယ်နိုင်ပါတယ်။
– ကိုယ်နေဟန်ထားကို ဂရုစိုက်ပါ။ ထိုင်တဲ့ထတဲ့အခါ ပုံစံကို ဂရုပြုပါ။ ပခုံးများဖြောင့်တန်းပြီး ကျော၊ လည်ပင်း၊ ခေါင်းစတာတွေကို တဖြောင့်တည်းထားပြီး မျက်လုံးက ရှေ့ကိုပဲကြည့်ပါ။ အနေအထားမမှန်ခြင်းဟာ လည်ပင်းနာခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဖုန်းကို တချိန်လုံးငုံ့ကြည့်နေတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ထပြီး လေ့ကျင့်ခန်းတချို့ ပြုလုပ်ပါ။
– မကြာခဏ အနားယူပါ။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ မတ်တပ်ရပ်ခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း စတာတွေ အချိန်ကြာကြာ ပြုလုပ်ပြီးရင် လေ့ကျင့်ခန်း အသေးစားအချို့ ပြုလုပ်ပါ။
– ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ လည်ပင်းနာခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေပါတယ်။
– ကောင်းကောင်းအိပ်ပါ။ အိပ်စက်စဉ် အနေအထားမမှန်ခြင်းဟာ လည်ပင်းကို နာကျင်တောင့်တင်းစေပါတယ်။ လည်ပင်းအောက်မှာ ခေါင်းအုံးသေးသေး ခံပေးပါ။
လည်ပင်းနာခြင်းဟာ အချိန်တော်တော်များများ ကြုံရတတ်တဲ့ ပြသနာဖြစ်ပါတယ်။ နေထိုင်မုပုံစံအချို့ ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် လည်ပင်းနာခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ လည်ပင်းနာခြင်းကို မရှောင်နိုင်ရင် ကုသမုနည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ နည်းလမ်းဟောင်းတွေကို မလုပ်ချင်တော့ရင် ကိုင်နီဆီယိုတိပ်ကို သုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Neck pain. https://medlineplus.gov/ency/article/003025.htm. Accessed January 15, 2017.
Chronic Neck Pain: What Condition Is Causing My Neck Pain?. http://www.spine-health.com/conditions/neck-pain/chronic-neck-pain-what-condition-causing-my-neck-pain. Accessed January 15, 2017.
Neck pain – Prevention. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/neck-pain/basics/prevention/con-20028772. Accessed January 15, 2017.